रोबी पिंकार्डमा दाता स्पटलाइट
lending8 मा सेप्टेम्बर 12, 2014 द्वारा लिखित।
रबी ऊर्जा र दिगोताको बारेमा भावुक छ। किन उनी एक एमएएफ दाता बन्न प्रेरित भए।
हाम्रो डोनर स्पटलाइट श्रृंखला प्रस्तुत गर्दै, जहाँ हामी हाम्रो एक सामाजिक लगानीकर्ताको बारेमा थोरै बाँडफाँड गर्दछौं र क्रेडिट-निर्माणको माध्यमबाट समुदायहरूको वित्तीय सशक्तिकरणलाई सहयोग पुर्‍याउन कार्यवाही गरेकोमा उनीहरूलाई धन्यवाद दिन्छौं।
ट्रिनिटी ग्रेड, रोबी क्यानाडाको रोयल बैंकसँग ऊर्जा अनुसन्धानमा काम गर्दछ। पछिल्लो वर्ष उनी र उनकी श्रीमती अस्टिनबाट सान फ्रान्सिस्को सरेका थिए। रब्बीले सान फ्रान्सिस्कोको सीढीहरू पहाडी, खाना र संस्कृतिमा मन पराएको छ।
नयाँ निवासीको रूपमा समेत उनले ध्यान दिन शुरू गरे कि सान फ्रान्सिस्कोको छिमेकहरू कति द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। यस वास्तविकताका कारण उनलाई थाहा थियो कि सहरका निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको लागि सही प्रकारको समर्थनमा लगानी गर्नु अत्यावश्यक छ।
हरेक वर्ष, रब्बी र तिनकी श्रीमतीले सहायता र संलग्न हुन विभिन्न स्थानीय संगठनहरू छान्छन्। वित्त, नीति र वातावरणमा उनको रुचि उनलाई सकारात्मक परिवर्तन कसरी गर्ने बारे लगातार सोच्न प्रेरित गर्दछ। पछि उनले MAF को बारेमा सुनें बजार र भ्यालेन्सियामा हाम्रो पुरानो अफिसबाट हिंडे, उनले केही अनौंठो काम गरे।
उनले लगानी गर्ने निर्णय गर्नु अघि, उहाँ हामीलाई भेट्न चाहानुहुन्छ। गत वर्ष, हामीले रोबीसँग बस्न, उहाँ कहाँ हुनुभयो (DC) को बारेमा पत्ता लगाउने, उहाँलाई हाम्रो मनपर्ने छिमेकी घटनाहरू (Dia de Los Muertos) साझेदारी गर्ने र भविष्यको लागि हाम्रो दर्शनको बारेमा कुरा गर्ने अवसर पाएका थियौं।
केही महिना पछि, हामीले यो कुरा बुझ्यौं कि रोबीले एमएएफमा चन्दा दिन निर्णय गरे (र यसलाई रोयल बैंकको कर्मचारी मिलान कार्यक्रमसँग डबल गर्न सक्षम भयो!)। उनले हामीलाई भने कि उनले महसुस गरे Lending Circles एक बढ्दो शहरव्यापी समस्या को एक महान औषधि थियो।
हामीले भर्खर रोबीलाई उहाँलाई सोध्न कल दियौं - “रु, किन तपाईले MAF लाई दान गर्नुभयो?” उनले हामीलाई भने: "जब म परोपकार दिने कुरा सोच्छु, म दिगो प्रभाव पार्न चाहन्छु।"
किनकि जनताको creditण निर्माण गर्ने, उनीहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्न मद्दत गर्ने र उनीहरूको वित्तीय हेरचाहलाई ताकि उनीहरूले समुदायलाई फिर्ता दिन सक्नेछन् भन्ने कुराले उहाँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि यसले स्थायी प्रभाव पार्छ।
जब हामीले गत बर्ष रबीसँग कुरा गरेका थियौं, हामी घुँडा टेकेका थियौं वेबसाइट पुनः डिजाइन। अब, एक सक्रिय संग ब्लग (र मेल गर्न सम्पादकीय क्यालेन्डर), हामीले उसलाई केहि प्रतिक्रियाको लागि सोध्नु पर्ने थियो।
जिज्ञासाको बाहिर, हामीले सोध्यौ, "रुन्नुहोस्, के तपाई हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि हामी राम्रो गरिरहेछौ? वा तपाईं अरूको बारेमा के सुन्न चाहानुहुन्छ? " रोबी हिचकिचाएनन्।
उनले भने कि उनलाई कसरी सुन्न मन पर्छ सदस्यहरू Lending Circles प्रयोग गर्दैछन् र हाम्रो प्रोग्राममा तथ्या for्कहरूको लागि हाम्रो वेबसाइट जाँच गर्दै प्रभाव। हामी तपाईंलाई, हाम्रा पाठकहरूलाई आमन्त्रित गर्दछौं आज उसको मनपर्ने जाँच गर्न।
भाषणको लागि र एमएएफमा लगानी छनौट गर्नु भएकोमा र स्यान फ्रान्सिस्को र यसभन्दा पछाडि परिश्रमी परिवारहरूको भविष्यका लागि धन्यवाद रब्बीलाई धन्यबाद।
रोबी र सम्मिलित हुनुहोस् क्रेडिट दिनुहोस् आज!